Esi Zụta ngalaba Nke edebanyere aha | Martech Zone
'Ve nọrọ ebe ahụ… na-egbutu ihe ọhụụ ijeri dollar ọhụrụ na akwa nhicha mmanya, wee laa n'ụlọ ma chọpụta na ngalaba ewerela. Nkera nke ọzọ na-aga n'ihu na-anakọta ngalaba aha na-eche ime ijeri dollar. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ebe n'etiti… ngalaba nwe na-adịghị eji ha ngalaba ga-Elezie na-ere ha. Na ndị ọchụnta ego chọrọ ịzụrụ ha na- dị njikere iji ego ole na ole nweta ha.
Ngalaba edebanyere aha na-enweghị ebe nrụọrụ weebụ jikọtara ha na-azụkarị ndị na-eche echiche na-echekwa ego na-azụ ahịa site na ịzụta aha ha nwere olile anya na onye na-azụta ihe n'ọdịnihu agaghị enweta ego.
Akwụsịla naanị n'ihi na ewerela ngalaba gị! Ererela m ngalaba dị ka $ 10,000 (afọ ole na ole gara aga) wee zụta ha maka $ 100. Ọ bụ egwuregwu na-atọ ọchị nke pusi na òké n'etiti onye na-azụ ahịa na onye na-ere… mana ọ bụrụ na ịchọrọ ngalaba ahụ, ị ​​ga-enweta ya! Lelee ihe omuma ihe a site na Whoishostingthis.com na otu esi azuta ngalaba edebanyere aha.
Feb 4, 2014 n’elekere 9:24 nke abali
Daalụ maka ikesa nke a Infographic Douglas .. Ọ bụ eziokwu na ịkwesighi ịkwụsị naanị n'ihi na ewegharala ngalaba gị. Na ahụmịhe nke m, azụrụla m ọtụtụ ngalaba edebanyere aha na ọtụtụ n'ime ha anaghị arụ ọrụ. Ọ bụ naanị ihe gbasara ịlele ihu igwe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịzụta ngalaba ahụ. Ma eleghị anya, ọ bụ ya mere flickr.com ji zụta ngalaba aha flicker.com